Iklasi yeklasi kunye nesithombe: Amacici omnyaka omtsha kwi-polymer yodongwe, iminyathelo ngesinyathelo sinyathelo
Awazi ukuba ungamangalisa njani amantombazana akho amahle kunye namancinci amancinci kwiholide ezayo - Unyaka omtsha? Unokuzikholisa ngalo mqondiso, ukuba ungumfazi. Sikucebisa ukuba wenze izandla zakho zamacici ezenziwe ngodongwe lwepolymer ngendlela yoLutsha lweNtsha. Zibukeka zingenangqiqo - ezingavamile, eziqhakazileyo, ezintle, zangaphambili, ezihlekisayo. Kuyafaneleka kubasetyhini baluphi na ubudala kunye neencinci kubantwana abancinci. Siqinisekisile ukuba lowo uya kuzisa esi sipho esingalilibaleki uya kuvuyisa ngokupheleleyo; xa ufumene ukuba uyenzele lo mma ngaliso - ungalahlekelwa isipho sokuthetha. Landela imiyalelo yethu yesinyathelo-nge-nyathelo kunye nesithombe kwaye yonke into iya kuvela!
Iibhanki zamaninzi (eluhlaza kunye obomvu)
Udongwe lwePolymer (kubhaka) imibala emi-3 (obomvu, emhlophe, eluhlaza)
I-Lacquer Fimo (okanye nayiphi na i-lacquer ekhethekileyo yodongwe lwe-polymer)
Ukukhawuleza ngamacici (швензы, izindandatho ezidibeneyo, izikhonkwane ngeendlebe)
Ngaphambi kokuba uqale, siyakucebisa: ngaphambi kokuba uqale ukwenza iigrafu, kufuneka usule izandla zakho ngeeplaykins ezimanzi okanye uzihlambe ngesepha ukuze ugweme ukungcola kwodongwe lwe-polymer. Iyakhanga kakhulu inkunkuma, ukungcola, iindawo ezahlukeneyo ze-villi kunye nezinto. Into efanayo sisenza ngenguqu nganye ukuya komnye umbala.
Makhe senze iibhande ezibomvu neziluhlaza ezimbini zomnsalana omncinci, apho siyihobisa khona amacici ethu.
Sithatha udongwe lwepolymer kwaye silugxotha ezandleni de kube lula kunye neplastiki. Xa izinto zilungiselelwe, senza amanqatha a-6, ubude obungengaphezulu kwe-10 cm. Amacwecwe amabini amhlophe, amabini amabini, amabini abomvu. Emva koko thabatha umgca omhlophe ovele ugobile uze uwujikeleze uhlaza okuqala, obomvu. Okufanayo kunye nomgca wesibini omhlophe.
Emva koko, gxotha ngobumnene onke amanqaku axhumeneyo kwaye ufumane umgca owodwa omude. Umbala omhle kwaye oqaqambileyo uya kuba mnandi wethu kwikamva.
Ngoku uye kwinqanaba elilandelayo. Qalisa ngokuchanekileyo ukuqhubela phambili ekutsaleni umgca obangelwayo. Okokuqala, ke okwesibini. Oku kufuneka kwenziwe ngokucophelela, ngaphandle kokutyumza ukutyungulwa komgca.
Emva kwinqanaba elidlulileyo kufuneka sibe nemimoya emibini (ii-candies) zolu hlobo (jonga isithombe ngezansi).
Ngoku sinamathele ipini kunye neliso, apho umhlobiso wethu uya kugcinwa khona. Kwinqanaba elincinane lomfanekiso esifaka intonga evela kwipipi, uze usikhuphe intonga. Ngaloo ndlela, silungiselele ikamva lethu kwikamva. Awudingi ukuyifaka (ukwenzela ukuba idlula ngaphantsi ngaphambi kokuphambili).
Ngoku sidlula ekupheleni komsebenzi wethu. Sibheka i-yummy yethu ehovini. Xa kubhaka kuyimfuneko ukulandela imiyalelo, eboniswa ekupakheni udongwe. Umzekelo, ukuba udongwe lwe-polymeric lwaseJamani uFimo lufuna iimitha ezingama-30 ukuya ku-30 ​​kwiqondo lokushisa elingekho ngaphezu kwe-110 C.
Emva kokuba sibheke iibhanti zethu - zixakeke ngaphandle, faka umgobo olungiselelwe ngokucophelela kwi-chupa chups uze ulinde ukuhlobisa kwethu kucolile. Siwafihla nge-varnish (mhlawumbi ngokukhethekileyo kwipolymer). Ngoku silinde de i-varnish yome. Sithatha i-Glue Moment okanye i-universal ngokukhetha kwakho kwaye ubambe izikhonkwane kunye ne-wand. Musa ukulibala malunga neendolo zethu, zibeke phezu kweentonga kwaye uzihlanganise.
Kwaye inqanaba lokugqibela - sidibanisa i-shvenzy kwiifom zethu.
Unokuthatha ngokukhawuleza iindawo ezifakwe kwii-earrings kwaye ubhake nazo izinto zokusebenza zethu, kwaye ungasebenzisi izikhonkwane okanye uzenzele ngokwahlukileyo.
Amacici ethu ambala avela kwidongwe ye-polym ayilungele unyaka omtsha! Ziqhaqha kwaye zingavamile ukuba aziyi kushiya ukungaboni nantoni enye. Jabulela wena kunye nabathandekayo bakho ngalommangaliso! Inhlanhla emsebenzini wakho!
Ukuvumelanisa okwenyaniso kumakhadi aseTarot
Umoya omoya ukusuka kwiintlobo kunye nobunzima ngezandla
Indlela yokulungiselela kakuhle izityalo zonyango
I-stenosis ye-congenital ye-esophagus kubantwana
Iimpawu ezifanelekileyo zembewu yeesame
Iigrasi zephepha ngezandla zakho
I-pastry kunye nama-alimondi
UFedor noSvetlana Bondarchuk bahlanganisana ngenxa yentombi yabo encinci
Creme brulee nge lavender kunye nobusi